Basikety-N1A 2020: hitiliana izay hiatrika ny BAL ny fifaninanana | NewsMada
Basikety-N1A 2020: hitiliana izay hiatrika ny BAL ny fifaninanana
Par Taratra sur 13/01/2021
Raikitra ny fifaninanana. Efa vonona tanteraka ny federasiona sy ny mpanohana amin’ny fiatrehana ny fifaninanana nasionaly N1A lahy sy vavy. Fifaninanana hitiliana izay solontena malagasy hiatrika ny Basket Ball Africa League (BAL) 2021.
Isan’ireo fifaninanana voatazona ho an’ny taom-pilalaovana 2020 ny fiadiana ny tompondaka nasionaly N1A lahy sy vavy, hotanterahina manomboka ny 16 janoary ho avy izao. “Tsy maintsy hatao ity lalao ity”, hoy ny nambaran’ny filohan’ny federasiona malagasy ny basikety, Ramaroson Jean Michel, ahafan’i Madagasikara manana solontena hiatrika ny fifanintsanana amin’ny “Basket Ball Africa League” (BAL) 2021, eo amin’ny sokajy lehilahy, hanomboka ny volana marsa izao. Tsy ny GNBC intsony, araka izany, ny solontenantsika hatreto fa mbola miandry ny vokatr’ity fifaninanana N1A ity. Ankoatra izay, hiakatra ho N1B lahy sy vavy ho an’ny taona 2021 izay ekipa telo mendrika amin’ity N1A ity, raha ny fanazavan’ny komisiona teknika. Na izany aza anefa, hoferana ho 1 000 ihany ny olona afaka mijery ny lalao eny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Marihina fa misy klioba roa, ny GNBC sy 2BC, efa nahavita fifindrana ka nivadika ho ligin’Analamanga sy Analajorofo, raha toa ka samy avy any amin’ny ligin’i Vakinankaratra izy ireo teo aloha. Tsiahivina fa ekipa lehilahy miisa 12 sy vehivavy miisa 10 ny hifanintsana manomboka ny 16 janoary hatramin’ny 20 janoary, mialoha ny hidirana amin’ny ampahefa-dalana ny zoma 22 janoary. Hotanterahina ny 23 janoary kosa, izay mifanindran-dalana amin’ny fifaninanana, ny fivoriambe ho an’ny federasiona malagasy ny basikety.
Mpanohana maro ny miara-miisalahy amin’ny federasiona. Ho an’ny Telma, hanolotra 2 500 000 Ar ho an’ny mpandresy lahy sy vavy ary 1 500 000 Ar kosa ho an’ny laharana faharoa izy ireo. Handeha mivantana amin’ny Startimes avokoa ny lalao rehetra, amin’ity fifaninanana ity, izay eo amin’ny lalao 40 eo. Ny Tsik Medical kosa ny hisahana ny lafiny fitandroana ny fenitra ara-pahasalamana eny an-toerana.